Pyae Phyo (MMiTD): လူတွေ ဘာကြောင့် ဒေါသထွက်ရင် အော်ပြောသလဲ?
(တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စာသားလေးမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ခဲ့ပါ။)
တစ်နေ့သ၌ သူတော်စင်တစ်ပါးနှင့် တပည့်ယောဂီတစ်စု တို့သည် မြစ်ဆိပ်သို့ ရေချိုးရန်ထွက်လာ ကြသည်။
မြစ်ဆိပ်သို့ ရောက်သော် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဒေါသတကြီးနှင့် အော်နေကြသော မိသားစုတစ်စုကိုတွေ့လေ၏။
ဤတွင် သူတော်စင်သည် တပည့်တို့ဖက်သို့လှည့်၍ အပြုံးဖြင့် မေး၏။
"တပည့်တို့... လူတွေဟာ ဘာအတွက်ကြောင့် ဒေါသထွက်ရင် တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် အော်ပြောကြလဲ သိကြသလား?"
ယောဂီတွေဟာ ခေတ္တမျှ စဉ်းစားကြပြီးတော့ တစ်ယောက် သော ယောဂီက ထပြောတယ်။
ဒေါသ ဖြစ်စဉ် ခနမှာ ပျောက်သွားတဲ့ အတွက်
ကြောင့် လူတွေ အော်ရတယ် ထင်ပါတယ်"
ဒီအခါမှာ သူတော်စင်က ပြန်မေးတယ်။
"ဒါပေမယ့်လို့ မိမိ ဒေါသ ထွက်နေတဲ့ လူဟာ
မိမိအနားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင် အကျယ်ကြီးပြောလို့ အကျိုးများလာပါ့မလားကွယ့်...
တိုးတိုးညင်သာစွာ နားလည်အောင်ပြောတာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ပိုနားဝင်စေမယ်မဟုတ်လား။"
အခြားတပည့်တို့ကလဲ အဖြေမျိုးစုံဝိုင်းပေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေ တစ်ခုမှစိတ်တိုင်း ကျဖွယ်မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးသူတော်စင်က ရှင်းပြတယ်။
"တပည့်တို့... သေချာမှတ်ထားပါ။ လူနှစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဒေါသထွက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာ ဝေးကွာသွားလေ့ရှိတယ်။
ဒီလို ကွာခြားသွားရတဲ့ အကွာအဝေးအလိုက် သူတို့ရဲ့စကားသံ ဟာလဲတစ်ဖက်သား ကြားရအောင် ကျယ်လာလေ့ ရှိတယ်။
ဒေါသ ထွက်ရလေလေ... ဒီဒေါသ ကြောင့်
ဝေးသွားတဲ့ တစ်ဖက်နှလုံးသား ကြားနိုင်အောင်
အသံကို ပို၍ ပို၍ ကျယ်ရလေလေပဲ။"
"ဒီလိုပဲ... လူနှစ်ဦး မေတ္တာမျှလာပြီ ဆိုရင်လည်း.. နှလုံးသားချင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးကပ်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် အသံဟာတိုးသထက်တိုးလာတယ်။
မေတ္တာမျှနေသူ နှစ်ဦးအတွက် အကွာအဝေးဆိုတာ မရှိသလောက်ကို နီးသွားတဲ့ အထိ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကို အချစ်နဲ့ဆွဲခေါ်လေ့ရှိတယ်။"
ဆက်လက်ပြီး သူတော်စင်က ရှင်းပြတယ်။ "ဒီလို တိုးသထက်တိုးလာ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နီးသထက်နီးလာရာကနေ အချစ်ကြီးဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာ စကားအနေနဲ့တောင် မပြောကြတော့ဘူးကွယ့်... တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တီးတိုးရွတ်ရုံ လောက်နဲ့သူတို့နှစ်ဦးလောကဟာ လှပနေတတ်တယ်။ နောက်ဆုံး အချစ်တတ်ဆုံးဆိုတဲ့ အချိန်မှာတီးတိုး ရွတ်ဖို့တောင် မလိုတော့လောက်အောင် အကြည့် တစ်ချက်နဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်နေကြတယ်။"
စကားအဆုံးမှာ သူတော်စင်ဟာ တပည့်အားလုံးကို ဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီး-
"ဒါ့ကြောင့် တပည့်တို့သင်ခန်းစာ အနေနဲ့မှတ်ပါ... မိမိချစ်ရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ တပည့်တို့ကိုယ်စီမှာရှိကြတယ်မဟုတ်လား... တစ်ခါတစ်လေ စိတ်အခန့်မသင့်လို့ ဒေါသများထွက်ခဲ့မိရင် စကားတတ်နိုင်သလောက် ကျယ်ကျယ်မပြောပါနဲ့..
နှလုံးသားချင်း မဝေးစေအောင် တတ်နိုင်သလောက်ထိန်းကြပါ.. အကယ်၍ ပြောမိဆိုမိရင်.. တစ်ခါ... နှစ်ခါ မသိသာပေမယ့်.. တစ်ချိန်ချိန်မှာ နှလုံးသားချင်း
အဝေးဆုံးကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်တော့မှ ပြန်နီးနိုင်မှာမဟုတ်တော့...ပါဘူး။
Ref: why do people shout in anger